Xildhiban Cabdiraxmaan Odowaa oo ku tilmaamay Golaha Shacabka Guri farmaajo uu leeyahay. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Xildhiban Cabdiraxmaan Odowaa oo ku tilmaamay Golaha Shacabka Guri farmaajo...
Xildhiban Cabdiraxmaan Odowaa oo ku tilmaamay Golaha Shacabka Guri farmaajo uu leeyahay.
Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya, haatana ah xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka, Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen (Odowaa) oo u warramay warbaahinta ayaa ka hadlay xaaladda dalka, gaar ahaan arrimaha soo kordhay.
“Waxaa ii muuqata markale in xildhibaanada Golaha Shacabka ee maalin dhoweyd la siray in haddana loo keeni doono oo ay sacbin doonaan oo ay dhihi doonaan waa ka laabanay labadii sano,” ayuu yiri Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen (Odowaa).
Previous articleGeerida fanaanadda Luul Jelyaani oo been Noqotay kadib markii ay sheegtay Fanaanada Caan ah.
Next articleShir looga hadlayo amniga Gobalka Bari oo shir guddoomiyay Taliyaha Qeybta Booliska Gobalka Bari oo ka dhacay Gobolkaas.
Imaaratka Carabta ayaa noqday dalkii ugu horreeyay ee Carab ah oo howlgeliyo warshad laga dhaliyo tamarta Nukliyeerka. Mas'uuliyiinta waxay sheegeen in warshadda tamarta Nukliyeerka...
Ciidamada Cirka Israel oo mar kale Gantaalo ku Garaacay Magaalada...